हुमिरा के हो र यो केको लागि प्रयोग भएको छ? | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार समाचार कम्पनी, चेकआउट कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट भारी खेल प्रेस समुदाय कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी >> हुमिरा के हो र यो केको लागि प्रयोग भएको छ?
हुमिरा के हो र यो केको लागि प्रयोग भएको छ?
हुमिरा के हो? | उपयोगहरु | यो कसरी काम गर्दछ | खुराक | सुरक्षा जानकारी | बचत
हामी मध्ये धेरैले भन्न सक्छौं कि हाम्रो जीवन पहिले नै पर्याप्त तनावपूर्ण छ। जागिरको काम, पारिवारिक जीवन, र महामारीको वरिपरि नयाँ नियमहरू बीच, हामीले हाम्रो नयाँ सामान्यमा थप अनिश्चितता वा अवरोधहरू थपिएको चिन्ता लिनुपर्दैन।
गठिया, प्लेक सोरायसिस, क्रोहन रोग, र अल्सरेटिव कोलाइटिस जस्ता स्वइन्फ्लेमेटरी रोग भएका धेरै व्यक्तिहरूका लागि अचम्मको ज्वालामुखी व्यवहार गर्दा निश्चय नै अनावश्यक रुकावट महसुस गर्न सक्छ।
हुमिराले यी अनिश्चित समयहरूमा अटोइन्फ्लेमेटरी रोग भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक आराम र निश्चितता प्रदान गर्न सक्दछ। हुमिरा अटोइन्फ्लेमेटरी रोगहरूको लागि एक उपचार छैन, जबकि यसलाई सुरक्षित रूपमा यी सर्तहरू प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र ती घटनाहरू हुँदा भडक-अपको गम्भीरतालाई कम गर्दछ। यहाँ हामी छलफल गर्नेछौं कि हमिराले कसरी विभिन्न स्वशायीय रोगहरूको लागि काम गर्दछ, यसलाई कसरी सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने, र कुन खुराकमा। हामी सचेत हुनको लागि महत्त्वपूर्ण ड्रग अन्तरक्रिया र साइड इफेक्टको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
हुमिरा के हो, र यो केको लागि प्रयोग भएको छ?
Humira औषधि adalimumab को ब्रान्ड नाम हो। यो औषधिहरूको एक ठूलो वर्गमा छ भनिन्छ बिमारी लाई संशोधन गर्ने एन्टि-रुमेटिक एजेन्ट (डीएमएआरडी) लाई भनिन्छ र यसलाई जीवशास्त्र भनिने DMARDs को उपसमलासमा छ। जीवविज्ञानहरू ड्रगहरू हुन् जुन जीवितहरूका (वा जीवविज्ञान) कोशिकाबाट बनेका हुन्छन्। हुमिरा एब्बीभिले निर्मित पर्चेको औषधि हो। यो काउन्टरमा उपलब्ध छैन।
हुमिराले TNF-alpha लाई रोक्न विशेष गरी कार्य गर्दछ र द्वारा प्रयोगको लागि अनुमोदित भएको थियो एफडीए २००२ मा। ट्यूमर नेक्रोसिस फक्टर (TNF) ब्लकरहरू इम्युनोसप्रप्रेसस औषधि हुन् (जसलाई इम्यूनोसप्रप्रेसन्ट पनि भनिन्छ)। TNF को गतिविधि अवरुद्ध गरेर - शरीरमा एक प्रकारको पदार्थ जो सूजन निम्त्याउँदछ used Humira को उपयोग गठिया, पट्टिका छालरोग, ankylosing स्पोंडाइलाइटिस, क्रोहन रोग, र अल्सरेटिव कोलाइटिस जस्ता भस्म स्वयम्यून रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। प्राय जसो DMARD हरू जस्तै हुमिराले प्राय: केहि हप्ता देखि केहि महिना लिन सक्दछ काम गर्न। यो एक होईन NSAID (गैर-स्टेरॉइडल विरोधी भड़काउने औषधि) वा कोर्टिकोस्टेरॉइड (स्टेरोइड)।
किनकि जीवशास्त्रले जटिल घटकहरू समावेश गर्दछ, तिनीहरूलाई पुन: उत्पादन गर्न सजिलो हुँदैन, सटीक, जेनेरिक प्रतिलिपि बनाउँछ। कुनै जेनेरिक विकल्पहरू उपलब्ध छैनन्, एफडीएले यस्तै प्रकारको औषधिहरूको आवश्यकतालाई बुझ्दछ र प्रतिस्पर्धीहरूलाई वैकल्पिक विकल्पहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। एक औषधि जुन बायोगोलिकसँग मिल्दोजुल्दो छ जुन एफडीएलाई पहिले नै स्वीकृत गरिएको छ, उसलाई बायोसारसिंग ड्रग भनिन्छ। त्यहाँ वर्तमानमा सातवटा हूमिरा बायोसिमिलरहरू छन् जुन एफडीएले अनुमोदित गरेको छ: हुलिओ, हडलीमा, अब्रिलाडा, ट्रिमफ्या, अम्जेविटा, सिल्टेजो र हाइरिमोज। जे होस् यी बायोसिमेलरहरूलाई एफडीएले अनुमोदन गरिसकेको छ, तिनीहरू २०२ the सम्म संयुक्त राज्यमा उपलब्ध हुनेछैनन्, किनकि हमीरा पेटेन्ट-सुरक्षित छ।
Humira प्रयोग गर्दछ
हुमिरा विभिन्न प्रकारका भड़काउने स्वचालित रोगहरूको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिन्छ। TNF-alpha गतिविधि अवरुद्ध गरेर, Humira निम्न अवस्था संग सम्बन्धित सूजन र दर्दनाक लक्षण कम गर्दछ।
सूजन वा संधिशोथ को लागी Humira: अवरेक्ट प्रतिरक्षा प्रणालीले जोर्नीहरूमा सूजन गराउन सक्छ, जस्तै पीडा, सूजन, र जोड़को कठोरता जस्ता लक्षणहरू सिर्जना गर्दछ। TNF-alpha एक प्रोटीन हो जसलाई संयुक्त असुविधाको जोखिम पैदा गर्दछ। हुमिराले जोर्नीहरूमा टीएनएफ-अल्फाको गतिविधिलाई लक्षित र अवरुद्ध गर्दछ, जसले लक्षणहरूलाई कम गर्दछ र संयुक्त क्षतिको प्रगति ढिलो गर्दछ। सामान्यतया भडकाउने गठियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिने अर्को औषधि हो methotrexate । क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, ह्युमिरा प्लस मेथोट्रेक्सेट लिने व्यक्तिहरूले मेथोट्रेक्सेट एक्लो लिने सक्रिय रूमेटोइड गठियाको लक्षणहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ।
योनि खमीर संक्रमण को लागी घरेलु उपचार
सम्बन्धित: गठिया उपचार र औषधि
प्लेक सोरायसिसको लागि हमिरा: जबकि सही कारण अज्ञात छ, धेरै TNF-alpha भएकोले छाला कोषहरूको बृद्धि गर्न सक्छ, रातो, फ्लाकी प्याचहरू लाई निम्त्याउँछ। शरीरमा TNF-alpha सर्कुलेटको मात्रा घटाएर, Humira कम हुन सक्छ र कहिलेकाँही छालामा पट्टिका घावहरू पनि हटाउन सक्छ।
सम्बन्धित: सोरायसिसको लागि जीवविज्ञानको बारेमा तपाइँलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
सोरियाटिक गठिया को लागी Humira: सोरियाटिक गठिया एक प्रकारको गठिया हो जसले केही मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दछ जो पहिले नै सोरायसिस भएका छन्। केही व्यक्तिहरूमा टीएनएफ-अल्फाको अधिकले संयुक्त दुखाइ, सूजन, र कठोरताका साथै छालामा रातो र घाउको ठोकरहरू ट्रिगर गर्न सक्छ जुन प्लेक्स भनिन्छ। अधिक TNF-alpha को गतिविधि अवरुद्ध गरेर ह्युमिराले यी फ्लेर-अपहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्दछ।
एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिसको लागि हमिरा: एन्कोइलोजिंग स्पन्डिलाइटिस मेरुदण्डको एक भड्काउने गठिया हो। अतिरिक्त टीएनएफ-अल्फा प्रेरित ईन्फ्लेमेसनले एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस भएका मानिसहरूलाई पीठमा दुखाइ र कठोरतामा योगदान पुर्‍याउँछ। ह्युमिराले वयस्क बिरामीहरूको लागि सक्रिय एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिसका लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ।
क्रोह्न रोगको लागि हमिरा: क्रोन रोग पखाला, पेट दुख्ने, र क्रम्पिंग जस्ता लक्षणहरू चेतावनी बिना देखा पर्न सक्छ। जब तपाईंको शरीरले अत्यधिक TNF-alpha उत्पादन गर्दछ, यसले अत्यधिक सूजन निम्त्याउन सक्छ जुन यी र अन्य क्रोनस रोगका लक्षणहरूलाई ट्रिगर गर्दछ। Humira अधिक सूजन हटाएर मद्दत गर्न सक्छ।
अल्सरेटिव कोलाइटिस को लागी Humira: अल्सरेटिव कोलाइटिस (UC) एक प्रकारको भडकाउने आंत्र रोग (IBD) हो। यो पुरानो र दिगो हुन्छ, यसले ठूलो आन्द्रा (कोलन) र मलाशयमा सूजन गराउँछ। सूजनको सही कारण थाहा छैन। यद्यपि मद्दत उपलब्ध छ। हुमिरालाई अल्सरेटिव कोलाइटिसका लक्षणहरू घटाउन वा हटाउन देखाइएको छ जस्तै बारम्बार र तत्काल पखाला, वजन घटाउने, मतली, र थकान।
Hidradenitis suppurativa को लागी Humira: Hidradenitis suppurativa (HS) एक पुरानो छाला अवस्था हो जहाँ छाला भित्र पीडादायी गांठहरू देखा पर्दछ। यी पीडादायी गांठहरू बग्गी, कपाल, नितम्ब, वा स्तनहरूमा ग्रंथि-असर छाला अन्तर्गत देखा पर्छ। धेरै TNF-alpha हुनु HS को गंभीरतामा योगदान पुर्‍याउँछ। हुमिराले TNF-alpha प्रोटीन ब्लक गरेर मद्दत गर्न सक्दछ, जसले छाला भित्रको सूजन र दुखाइ कम गर्न सक्छ।
Uveitis को लागी Humira: युभिटिस भनेको आँखामा नाजुक टिश्युको सूजन हो जसलाई युभिया भनिन्छ। संक्रामक uveitis भाइरस वा ब्याक्टेरियाबाट संक्रमणको कारण। गैर संक्रामक यूवेइटिस युवाको जीर्ण सूजन हो जुन भाइरस वा ब्याक्टेरियाको कारणले हुने होईन। धेरै प्रोटीनको साथ धेरै TNF-alpha संक्रमित युवेइटिसमा देखिएको प्रकाशको लागि सूजन, पीडा, र संवेदनशीलतामा योगदान पुर्‍याउँछ। हुमिराले आँखामा भएको जलनलाई घटाउन सक्छ, असहज लक्षणहरूलाई कम गर्दछ।
किशोर idiopathic गठिया को लागी Humira: १ pain बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई लगातार दुखाइ, सूजन, वा जोर्नीहरूमा कडापनका लक्षणहरू हुन सक्छ किशोर इडिओपाथिक गठिया (Jia) । जब यो एक भन्दा बढी संयुक्तमा हुन्छ, यसलाई पॉलीआर्टिकुलर किशोर इडिओपाथिक गठिया भनिन्छ। TNF-alpha संयुक्त सूजनमा योगदानकर्ताहरू मध्ये एक हो जसले लगातार पीडा, सूजन, र कठोरता निम्त्याउँछ। हुमिराले TNF-alpha को गतिविधि रोक्दछ। सामान्यतया JIA को उपचार गर्न प्रयोग गरिने अर्को औषधि हो methotrexate । क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, हुमिरा र मेथोट्रेक्सेटको साथ बच्चाहरूको उपचार गर्ने मात्र methotrexate मा मात्र लक्षणहरूको उल्लेखनीय सुधार भएको देखाइएको छ।
Humira कसरी काम गर्छ?
हुमिरा एक मोनोक्लोनल एन्टिबडी हो जुन विशेष गरी TNF-alpha लाई बाँध्छ। TNF-alpha एक सानो प्रकारको प्रोटीन हो जसलाई साइटोकाइन भनिन्छ। साइटोकाइन्स प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा सूजन पैदा गर्न प्रयोग गर्दछ। सामान्यतया, TNF-alpha जस्तै cytokines को रिलिज कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली कोषहरू एक अर्कासँग कुराकानी गर्दछ। जब प्रतिरक्षा प्रणाली कोषहरूले संक्रमण पत्ता लगाउँछन्, शरीरमा अन्य कोशिकालाई स alert्केत गर्न TNF-alpha जारी गर्दछन् कि संक्रमण छ। यो संचार मार्गले संक्रमणलाई मार्नको लागि शरीरको लागि आवश्यक पर्ने सूजन निम्त्याउँछ। केहि अटोइन्फ्लेमेटरी रोगहरूमा, टीएनएफ-अल्फा संक्रमण नभएको अवस्थामा बाहिर निस्कन्छ, जसले शरीरमा विभिन्न ऊतकोंमा सूजन ल्याउँछ।
ह्युमिरा जस्ता लागूपदार्थ जो विशेष गरी TNF-alpha लाई बाँध्छन् भनिन्छ TNF- ब्लाकिंग एजेन्टहरू। TNF-alpha लाई बाँधेर, क्लिनिकल अध्ययनहरूले देखाए कि Humira TNF-alpha को भड्काउने गतिविधिलाई activity वा ब्लकहरू बेअसर गर्दछ। औषधिले शरीरमा कोषहरू पनि निम्त्याउँछ जुन अत्यधिक TNF-alpha अभिव्यक्त गर्दछ।
TNF- ब्लक गर्ने एजेन्टहरू प्रतिरक्षारोधी हो। शरीरमा TNF अवरुद्ध गरेर, Humira दमन गरिरहेको छ - वा प्रतिरोध प्रणालीमा अवरुद्ध वा अनावश्यक भडकाउने गतिविधि को गतिविधि कम छ। हुमिराले प्रतिरक्षा प्रणालीमा सूजन कम गर्न सक्ने हुनाले, ह्युमिरालाई गठिया, पट्टिका छालरोग, आन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस, क्रोनज रोग, र अल्सररेटिव कोलाइटिस जस्ता भड्किलो स्व-प्रतिरक्षा रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ ह्मिराले सामान्यतया प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन सक्छ, केही व्यक्ति संक्रमणलाई बढी जोखिममा पार्दछ।
कसरी हामिरा लिने
Humira एक subcutaneous (छाला अन्तर्गत) इंजेक्शनको रूपमा दिइन्छ। Humira जस्तो इंजेक्शन ड्रग्स एक इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा निर्धारित गर्नु पर्छ। हुमिरा डोजिंग कुन सर्तमा आधारित छ जुन यो उपचारको लागि प्रयोग भइरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि सही डोजिंग अनुसूची पालना गरीएको छ शर्त हामिरालाई उपचारका लागि प्रयोग गरिदैछ।
कुन चाँडै ह्मिराले काम गर्न शुरू गर्दछ विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, चिकित्सा उपचारको गम्भीरता सहित र उपचारको लागि कुन अवस्था हुमिरा प्रयोग गरिदैछ। केही व्यक्तिले दुई हप्ता पछि नै ह्मिरासँग रोगको राहत महसुस गर्न थाल्छन्, तर अरूलाई भने यसले तीन महिनासम्म लिन सक्दछ।
औसत टाउको चिसो कति लामो हुन्छ?
Humira एक रखरखाव (दीर्घकालीन) औषधी मानिन्छ। यो लामो समयसम्म तपाइँले यसलाई लिईंदै लक्षण राहत प्रदान गर्न जारी राख्दछ। त्यहाँ जब तपाईं ले यो रोक्न को लागी सेट गरिएको अन्तिम समय छैन। तपाईंले वापसीको अनुभव गर्नुहुने छैन यदि तपाईंले ह्युमिरा लिन रोक्नुभयो भने, तर तपाईंको लक्षणहरू फेरि देखा पर्न सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई नियमित अंतरालमा तपाईको भड्किलो प्रतिक्रिया र ह्युमराको प्रतिक्रियालाई जाँच गर्दछ। तपाई र तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्णय गर्न सक्दछ कि कहिले, वा यदि, Humira बन्द गर्नु उचित छ। चिकित्सा सल्लाह लिनु बिना नै तपाई आफैले हुमिरा लिन बन्द गर्नु हुँदैन।
Humira दुई ​​तरीकाले dosed छ। Humira शुरू गर्दा, एक सुरू खुराक दिइन्छ। सुरू खुराक एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक को निरीक्षण वा द्वारा इंजेक्सन गर्नुपर्छ। यो महत्वपूर्ण छ कि उचित इंजेक्शन प्रविधि प्रयोग गरियो। उचित इंजेक्शन तकनीक तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। इन्जेक्सन गर्न राम्रो ठाउँहरू पेट हुन जान्छन् (पेटको बटनबाट करिब एक इन्च टाढा) र फिलाको छेउहरू भन्छन्, भिक्टोरिया रफिंग , RN, जोन्स हप्किन्सको नर्स प्रबन्धक।
सुरू खुराक पछि, मर्मत खुराकको श्रृंखला दिइन्छ। यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि Humira को सुरू खुराक र मर्मत खुराक खुराक सधैं एकै हुँदैन। मर्मतसम्भार खुराक तपाईको घरको आराममा ईन्ज्याक गर्न सकिन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले घरमा ईन्जेक्सन कसरी गर्ने प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यहाँ शिक्षामूलक सामग्रीहरू पनि छन् जुन तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई घरमै रेफर गर्न तपाईंलाई दिन सक्छन्। हुमिरालाई ती दिनहरूमा ईन्जेक्सन गर्नु हुँदैन जुन सुरु वा मर्मत खुराक द्वारा निर्दिष्ट गरिएको छैन।
Humira वयस्क dosing
संकेत डोज सुरू गर्दै खुराक मर्मत
संधिशोथ दिन १ मा mg० मिलीग्राम Mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
प्लेक सोरायसिस दिन १ मा mg० मिलीग्राम Mg० मिलीग्राम दिन on मा, र mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
सोरियाटिक गठिया Mg० मिलीग्राम Mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस दिन १ मा mg० मिलीग्राम Mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
क्रोन रोग १ मिनेट मा १ mg० मिलीग्राम (एक दिन मा दिइएको छ वा दुई लगातार दिनको बीचमा विभाजित) 15० मिलिग्राम दिन १ 15, र mg० मिग्रि प्रत्येक हप्तामा २ Day बाट शुरू हुन्छ
अल्सरेटिव कोलाइटिस १ मिनेट मा १ mg० मिलीग्राम (एक दिन मा दिइएको छ वा दुई लगातार दिनको बीचमा विभाजित) 15० मिलिग्राम दिन १ 15, र mg० मिग्रि प्रत्येक हप्तामा २ Day बाट शुरू हुन्छ
Hidradenitis suppurativa १ मिनेट मा १ mg० मिलीग्राम (एक दिन मा दिइएको छ वा दुई लगातार दिनको बीचमा विभाजित) 15० मिलीग्राम दिन १ 15, र EITHER mg० मिलीग्राम प्रत्येक हप्ता दिन २ 29 वा mg० मिलीग्राम प्रत्येक हप्ता दिन २ on बाट सुरू हुन्छ।
युभिटिस दिन १ मा mg० मिलीग्राम Mg० मिलीग्राम दिन on मा, र mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
हुमिरा पेडियाट्रिक डोजिंग
किशोर इडिओपाथिक गठिया: २ बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
२२--33 एलबीएस: १० मिलीग्राम
-33-66। Lbs: २०mg
+ 66+ एलबीएस: m०mg
२२ lbs to l 33 lb भन्दा कम: प्रत्येक अन्य हप्ता १० मिलिग्राम
L 33 lbs to l 66 lb भन्दा कम: प्रत्येक अन्य हप्ता २०mg
L 66 एलबी वा अधिक: प्रत्येक अन्य हप्ता m०mg
क्रोन रोग: years बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
-37-8787 lbs: दिन १ मा mg० मिलीग्राम
+ 88+ एलबीएस: १ मा १ mg० मिलीग्राम (एक दिन मा दिइएको छ वा दुई लगातार दिनको बीचमा विभाजित)
L 37 lbs to l 87 lbs: :० मिलीग्राम दिन १ 15 मा, र २० मिलिग्राम हरेक हप्ता दिन २ on बाट शुरू हुन्छ
L 88 एलबी वा अधिक: दिन १ 15 मा mg० मिलीग्राम, र other० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता दिन २ on देखि शुरू हुन्छ
अल्सरेटिव कोलाइटिस: children बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
-44-8787 lbs: दिन १ मा mg० मिलीग्राम
L 44 एलबी देखि l 87 एलबीएस: 8० मिलीग्राम 8 र दिन १ 15, र EITHER mg० मिलीग्राम प्रत्येक हप्ता दिन २ OR वा २० मिग्रि प्रत्येक हप्ता दिन २ on बाट सुरू हुन्छ।
L 88 एलबी वा अधिक: 8० मिलीग्राम दिन and र दिन १ 15, र EITHER mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता दिन २ OR वा m०mg हरेक हप्ता देखि २ 29 मा सुरू हुन्छ।
Hidradenitis suppurativa: बच्चाहरु १२ बर्ष वा माथिका
-1 66-११32 lbs: दिन १ मा m०mg
१2२+ एलबीएस: १ मा १ 160० मिलीग्राम (एक दिन मा दिइएको छ वा दुई लगातार दिनको बीचमा विभाजित)
Mg० मिलीग्राम दिन on मा, र mg० मिलीग्राम प्रत्येक अर्को हप्ता
15० मिलीग्राम दिन १ on, र EITHER mg० मिलीग्राम प्रत्येक हप्ता दिन २ on देखि सुरू हुन्छ; वा mg० मिलीग्राम प्रत्येक अन्य हप्ता दिन २ on बाट शुरू हुन्छ
युभाइटिस: २ बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
त्यहाँ जब Humira प्रशासितको लागि कुनै विशेष सर्तहरू छैनन्। यो दिन वा गतिविधि (भोजन जस्तै) को एक निश्चित समय वरिपरि ईजेक्सन गर्न आवश्यक छैन। अधिकांश व्यक्तिहरू हुमिरालाई त्यस्तो समयमा सुई मनपर्दछन् जुन उनीहरूको लागि उपयुक्त छ र उनीहरूको दैनिक तालिकामा फिट हुन्छन्, जस्तै सुत्ने अघि वा बिहानको खाजा पछि। क्यालेन्डरको प्रयोग वा फोन अनुप्रयोगहरू अनुस्मारकहरू सेटअप गरेर पनि मद्दत गर्न सक्दछ जब मर्मत इंजेक्शनहरू प्रशासित गर्नुपर्दछ।
गर्भवती हुँदा पेट दुखेको के गर्न सक्छु?
यदि तपाईंले हमीराको एक खुराक याद गर्नुभयो भने, अर्को खुराक इन्जेक्स गर्नुहोस् जति सक्दो तपाईंलाई सम्झिन्छ। यदि अर्को डोजको लागि यो लगभग समय हो भने, छुटेको खुराक छोड्नुहोस् र खुराक तालिका अनुसार अर्को रखरखाव खुराक लिनुहोस्।
१०-१० दिनको हुमिराको आधा जीवन (यसमा जैविक क्रियाकलापको आधा गुमाउन एक औषधि लिने समय हो)। धेरै जसो औषधिहरू शरीरबाट चारदेखि पाँच आधा जीवनमा पूर्ण रूपमा हटाइन्छन्, त्यसैले हमीराको चिह्न शरीरमा १ 14 हप्तासम्म पाउन सकिएन प्रयोग रोकिए पछि।
यो Humira मा अधिक मात्रा गर्न दुर्लभ छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं गल्तिले धेरै नै ह्युमिरा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तुरून्त नियन्त्रण केन्द्र लाईन १-8००-२२११२२ मा तुरून्त कल गर्नुहोस् वा आपतकालीन चिकित्सा सेवाहरू खोज्नुहोस्।
Humira एक मा आउँछ प्रिफिल्ड सिरिंज वा एक प्रिफिल हुमिरा पेन र यसको मूल कन्टेनरमा फ्रिजमा भण्डार गरिएको हुनुपर्दछ र प्रयोग नभएसम्म प्रकाशबाट सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। Humira स्थिर, तातो, वा समयावधि समाप्ति मिति पछि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हुमिरा प्रयोग नगर्नुहोस् यदि यो स्थिर र पग्लिएको छ वा कुनै तरिकाले तताइएको छ।
हुमिरा पेन वा प्रिफिल गरिएको सिरिन्ज फ्रिज बाहिर १ to देखि minutes० मिनेट लिन सकिन्छ तरल कोठाको तापक्रममा पुग्न अनुमति दिन। एक पटक कोठाको तापक्रममा, हूमिरा अझै पनि प्रकाशबाट सुरक्षित गरिनु पर्नेछ र १ 14 दिन भित्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। खारेज गर्नुहोस् र हुमिरा प्रयोग नगर्नुहोस् यदि यो कोठाको तापक्रममा १ 14 दिन भन्दा बढि भइसकेको छ।
तपाईंले कुनै पनि हिसाबले हुमिरालाई न्यानो पार्नु हुँदैन (यसलाई तातो पानीमा नचलाउनुहोस् वा यसलाई माइक्रोवेभमा नराख्नुहोस्)। तरल विकिरण वा बादल भएको वा यसमा कण भएमा हुमिरा प्रयोग गर्न मिल्दैन। होमिरा पेन वा प्रिफिल्ड सिरिन्ज ह्यान्डल गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई कुचुरिन वा छोड्नु हुँदैन।
Humira सुरक्षा जानकारी
हुमिरा वयस्कहरू र २ बर्ष भन्दा बढी उमेरका बच्चाहरूको लागि सुरक्षित हुन्छ, यो अवस्थाको आधारमा यो उपचारको लागि प्रयोग भइरहेको छ।
हुमिरा सम्भावित जोखिम र सुविधाहरूको विचार गरेपछि गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेकी महिलाहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Humira एक सक्रिय संक्रमण को साथ कसैले लिनु हुँदैन, वा जो धेरै संक्रमण हुन्छ। तपाईलाई ह्युमिरा सुरु गर्नु भन्दा पहिले क्षयरोगको लागि जाँच गर्नुपर्नेछ।
हुमिरा कुनै पनि सामग्री वा घटकहरूसँग एलर्जीको साथ लिनु हुँदैन।
अन्य औषधि लिने व्यक्तिहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउँदछन् (अन्तर्क्रिया हेर्नुहोस्) उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जोखिम र फाइदाहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्दछ।
हुमिरा सुरु गर्नु भन्दा पहिले, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आधारभूत रक्त कार्य र सूजनको स्तर जाँच गर्न केहि रक्त परीक्षणहरू चलाउन चाहन्छ।
Humira लिने व्यक्तिहरूले लाइभ खोपहरू लिन हुँदैन। प्रत्यक्ष खोपले फ्लुमिस्ट र कुखुरा पोक्स भ्याक्सिन समावेश गर्दछ। यदि तपाईंले ती मध्ये कुनै पनि खोपहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने, हमीरा शुरू गर्नु अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचित गर्न निश्चित हुनुहोस्।
Humira सुरु गरेपछि, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरून्त सूचित गरिनु पर्छ यदि तपाईंलाई संक्रमण भयो वा संक्रमणको कुनै संकेत भयो भने। ह्युमिरा लिने मानिसहरूलाई सम्भावित गम्भीर वा घातक फ fun्गल संक्रमण सहित विभिन्न प्रकारका संक्रमणको खतरा बढेको छ।
यदि तपाईंले ह्युमिरा शुरू गरे पछि कुनै बिग्रेको लक्षण देख्नुभयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई थाहा दिनुहोस्।
केहि रिपोर्टहरू सुझाव दिईएको छ कि ह्युमिरा प्रयोग गर्नाले स्नायु प्रणाली सम्बन्धी मुद्दाहरू बढाउन सक्दछ, नयाँ सुरुवात मल्टिपल स्क्लेरोसिस सहित।
बच्चाहरू र वयस्कहरूले हमीरा वा अन्य TNF- ब्लकरहरू लिइरहेका लागि, क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यहाँ क्यान्सरको असामान्य घटनाहरू भएको छ बच्चा, किशोर, र युवा वयस्कहरूमा TNF- ब्लकरहरू लिने छालाको क्यान्सर र लिम्फोमा सहित।
Humira को सामान्य साइड इफेक्टमा समावेश:
इंजेक्शन साइट प्रतिक्रियाहरू (दुखाइ, रातो रातो दाग, सूजन, खुजली, चोट)
माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण, साइनस संक्रमण, र मूत्र संक्रमण
जोड़, पेट, वा कम्मर दुखाइ
कलेजो वा मांसपेशिको एन्जाइम उचाई
Humira ले गम्भीर साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउन सक्छ, सहित:
जीवाणु सेप्सिस जस्ता गम्भीर संक्रमण
भाइरसको वाहकमा हेपेटाइटिस बी संक्रमण
क्षयरोग पुन: सक्रियण
एलर्जी प्रतिक्रियाहरू (एनाफिलैक्सिस, सास फेर्न समस्या, पित्ती, अनुहार, ओठ, वा मुखमा सूजन)
स्नायु प्रणाली समस्याहरू (लक्षणहरूमा झर्को वा सुन्न, दर्शन संग समस्या, हात वा खुट्टामा कमजोरी, र चक्कर आउँछ)
रगत समस्या (संक्रमण लड्ने रक्त कोषहरू घटेको)
मुटुको असफलता (लक्षणहरूमा सासको कमी, टाउको र खुट्टाहरूमा सूजन, वा अचानक वजन बढ्नु समावेश छ)
लुपस जस्तो सिन्ड्रोम सहित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाहरू (लक्षणहरूमा छातीको अस्वस्थता, सासको कमी, जोड़ दुखाइ, वा हात र गालामा दाग जो घाममा झन् खराब छ)
कलेजो समस्या (लक्षणहरूमा धेरै थकित महसुस, छाला वा आँखा पहेलो देखिन्छ, भूख घटाउने वा बान्ता, वा पेटको दायाँपट्टि दुखाइ) समावेश गर्दछ, जसले कलेजोको विफलता वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
सोरायसिस (रातो स्केली प्याचहरू वा छालामा उठेको बम्पहरू जसमा पुस भरिन्छ)
फेफो समस्या (मध्यवर्ती फोक्सोको रोग वा सार्कोइडोसिस)
रक्त वाहिका दाह
क्यान्सर (छालाको क्यान्सर, लिम्फोमा, र ल्यूकेमिया सहित)
Humira को अन्य औषधिहरु संग नकारात्मक कुराकानी हुन सक्छ कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर छ। अन्य TNF- ब्लकरहरूमा व्यक्तिहरू मनपर्दछ रिमिकेड (infliximab) , Orencia (abatacept), Kineret (anakinra), एन्ब्रेल (ईन्टानर्सेप्ट) , Cimzia (certolizumab pegol), वा सिम्पोनी (golimumab) एकै समयमा यी ड्रग्स र Humira लिनबाट अलग रहनु पर्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचीत गर्नुहोस् यदि तपाईले कहिले Rतुक्सान (राइटुक्सिमाब), इमुरान (एजाथिओप्रिन), वा पुरीनिथोल (मर्पाटोपुरिन,--MP) हुमेरा सुरु गर्नु अघि लिनुभएको छ।
हुमिराले वारफेरिनको एकाग्रता र बीसीजीको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ।
Humira र रक्सीको प्रयोगको साथ कुनै अन्तर्क्रिया छैन।
त्यहाँ कुनै खाद्य पदार्थहरू छैनन् जुन हूमिरा लिँदा प्रतिबन्धित गर्न आवश्यक पर्दछ।
के तपाईलाई लाग्छ कि हुमिरा तपाई वा तपाईका परिवारका लागि ठीक छ तर लागतको बारेमा चिन्तित छन्? हुमिरा एकदम महँगो छ ( एक महिना को आपूर्ति को लागी $ 7,000 भन्दा अधिक )। भाग्यवस, एकलकेयरमा हमिराको लागि निःशुल्क कूपन छ जुन तपाईं प्रत्येक रिफिलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। का लागि कुपनहरू पाउनुहोस् हुमिरा यहाँ प्रिफिल्ड सिरिंजहरू वा Humira कलम को लागी यहाँ कुपन ।
तपाईंको डाक्टरले खराब सनबर्नको लागि के गर्न सक्दछ (र गर्न सक्दैन)
बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू
त्यहाँ गैर drowsy benadryl को रूप मा यस्तो चीज छ
के वयस्कहरु को लागी एक कान संक्रमण मा मद्दत गर्न सक्छ
के यो दैनिक Miralax लिन ठीक छ?
zyban के हो र यो कसरी काम गर्दछ
के उच्च रक्तचाप तल ल्याउन सक्छ